Ukulindela kunye nenyaniso: iNethiwekhi inesithombe sikaSvetlana Bondarchuk ngaphandle kwefotohop
Akuzange kubekho ngqalelo kuluntu ku-Svetlana Bondarchuk kangangokuthi emva kokuba ehlukane nomyeni wakhe owaziwayo. Emva kokuhlala iminyaka engama-25 emtshatweni kunye nokuba yinye yezona zibini ezizinzile kwizoshishino, isibini esitshatileyo saqhekeka iminyaka emibini edlulileyo.
I-intanethi ibuza ukuba kutheni uFedor noSvetlana Bondarchuk baqhawule, kuba abatshatileyo abavakalisi ngeengcambu zabo. Omnye ucinga ukuba u-Paulina Andreeva "ngu-razluchnitsa" ubeka isohlwayo, kwaye abanye basola uSvetlana ngokwakhe, okhunjulwa ukuba uyamkhathaza kwicala.
Ukupapashwa kwiSveta R (@ a030aa)
Ukwahlukana kwatshintsha ngokupheleleyo ubomi bukaSvetlana Bondarchuk. Kwimodeblogging yeminyaka engama-49 ubudala imihla ngemihla kukho iifoto ezikwazi ukuqhuba unontanga ekudakaleni kweengonyama zelizwe.
Kwimifanekiso kwi-Instagram yeSvetlana Bondarchuk, ubonakala encinci kuneminyaka yakhe. Amafayini akhathala ngama-dithyrambs kumculo wabo othandekayo, amhlonela isikhumba sakhe esilungileyo, ukwakheka okusebenzayo kunye nokubonakala kwimibala.
Kulo bhulo lomlingane owayengumlingani womlawuli wekhulu lezithombe, amaphepha afanelekileyo e-glosses abizayo.
Ifoto nguSvetlana Bondarchuk ngaphandle kwe-photoshop ezothusayo abasebenzisi be-Intanethi
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlulileyo kwiziko laseGogol abaninzi abadumileyo babuthela ukubhiyozela iminyaka engama-5 yokukhumbula i-theater. Phakathi kweendwendwe zabonwa nguFedor Bondarchuk kunye noPaulina Andreeva noSvetlana Bondarchuk kunye nomhlobo othembekileyo uNadezhda Obolentseva. Abalobi beendaba babelandela ngokulandela ukutshatyalaliswa kwamathuba omtshato. UFedor noSvetlana abazange baphephe kunye baze bajike ngamagama ambalwa. Lo mzuzwana weza kwiifoto zabafoto beefoto ababekho kwiGogol Centre, kwaye ngoko kwenye yeempapasho ezidumile. Kulo mfanekiso, uSvetlana Bondarchuk akabukeka njengowesifazane osemgangathweni oqhelekileyo, abafundi abaqhele ukubona kumaphephancwadi e-Intanethi nakwi-microblogging yakhe:
ibhinqa.ru Ngendlela, kuzo zonke ezinye iifoto zendaba zeSvetlana Bondarchuk, ezenziwe kwiGogol Centre, ziphinda zihluthwe ngokucophelela:
Abasebenzisi be-Intanethi bathuswa yifoto yesimo seSvetlana Bondarchuk. Ukubonakala kweengonyama zehlabathi kunokuxubusha ngamandla kwiinkcazo kwisithombe:
UPrankers Vovan noLexus bazama ukudibanisa uVladimir Friske noDmitry Shepelev
Iifowuni ezigqithiseleyo zeenkwenkwezi ze "I-Stylish YaseYurophu ye-2016", isithunzi
Ukutshwenyeka: Ekubhedeni likaSergei Zverev wayeyi-double, ividiyo
I-Kirkorov i-striptease idonswa ngumqhubi we-50: I-video yokutshitshisa
Ukuza Kweyesithathu: U-Alexander Gobozov ubuyela "kwiDom-2"
U-Ksenia Borodina wazisa u-Olga Buzov ukulila ngamazwi malunga nomtshato, ividiyo
UMitya Fomin kwiintengiso kwivenkile yeeyile, ifoto
USergey Shnurov waba ngu "Umntu Wonyaka" kwii-GQ Awards, iifoto kunye namavidiyo
Ndifanele ndizinakekele njani iinwele ezisezantsi?
Indlela yokuqala ukuzalisa iinkati
Ukuphindaphinda nokuphelelwa amandla kwabasebenzi
UMyili uAnna Sui
Umama oselula kunye nokukhulelwa kwangaphambili
I-horoscope efanelekileyo kwiveki kaDisemba 18-24, 2017
Indlela yokulahla i-cellulite ekhaya
Ii-Muffins ezine-Baileys liqueur
Ungasusa njani amathanga ukusuka ekugqibeni
I-Fashionable TOP-4: Iibhothi ezitshatileyo zobusika 2016-2017
Uvuyo oluhle ngedwendwe lokugqibela-2017 kwivesi, iikhonkco kunye neengoma
Indlela yokunyamekela imilomo yakho
Indlela iimpahla ezichaphazela ngayo ubomi bomntu